CEEBEEY TACAAL CEEBEEY TACAAL: Xulka Yar Ee Iceland Oo Euro 2016 Ka Reebay England Una Soo Baxay Wareega 8da Euro 2016. | Haqabtire News
CEEBEEY TACAAL CEEBEEY TACAAL: Xulka Yar Ee Iceland Oo Euro 2016 Ka Reebay England Una Soo Baxay Wareega 8da Euro 2016.
TAARIIIKH: Xulka yar ee Iceland oo xulka weyn ee England ka reebay tartanka Euro 2016 ka dib markii ay 2-1 ku garaaceen iyagoo u soo baxay wareega 8da ee tartanka qaramada Yurub iyagoo wareega xiga la ciyaari doona France. Ku Darso waa markii ugu horeysay abid ee ay Iceland ka qeyb qaadato tartanka Yurub waxaana ay durbaba marayaan wareega 8da.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay si waali ah qeybtii hore, xulka England ayaana fursad u helay inay ciyaarta hogaanka u qabtaan daqiiqadii 4aad markii loo dhigay gool ku laaad iyadoo goolhayaha Iceland Halldorsson uu jalaafeeyay Raheem Sterling xerada ganaaxa dhexdeeda garsooraha ayaana tilmaamay rigoore.
DAQIIQADII 4aad GOOOL!!! Kabtan Wayne Rooney ayaa u soo istaagay kaasoo shabaqa ku hubsaday rigoorada inkastoo goolhayaha Halldorsson uu raacay hadana waa uu awoodi waayay inuu celiyo darbada Rooney.
DAQIIQADII 6aad GOOOL!!! Laakiin hogaankii England waxa uu waaray kaliya 90 ilbiriqsi iyadoo Iceland ay heshay goolka barbaraha. Gunnarsson ayaa foori gacan dheer soo tuuray, daafaca Arnasson ayaa madax ku taabtay waxaana ay kubada lugta u gashay daafaca Sigurdsson kaasoo shabaqa ku taabtay ciyaartana ka dhigay barbaro 1-1 ah.
Toban daqiiqo ka dib England ayaa ku dhawaatay inay mar kale ciyaarta hogaanka u qabato iyadoo Dele Alli uu kubad gantaal ah goolka ku tuuray laakiin si ciriiri ah ayay ku kor martay birta goolka, laakiin maxaa ku xigay? Iceland ayaa si rasmi ah hogaanka u la wareegtay.
DAQIIQADII 18aad GOOOL!!! Joe Hart maxaad sameysay? Kubad kale oo oo foori gacan ah oo uu soo tuuray Gunnarsson ayay ka bilaabatay hadana, inkastoo ay England iska bixiyeen markaan hadana kubada waxaa xerada ganaaxa banaankeeda ku helay Sigthorsson kaasoo isku toos toosiyay islamarkaana darbo daciif ah oo taraarax ah ku tuuray goolka England, waxa ay u muuqatay inay Joe Hart badbaadinayo laakiin gacmihiisa ayay kubada ka baxsatay waxaana ay ku nasatay shabaqa.
Seddex gool oo la iska dhaliyo 18ka daqiiqo ee ciyaarta ugu horeysay waa goolashii ugu dhakhsiyaha badnaa ee taariikhda tartanka Qaramada Yurub.
Tan iyo markaas Harry Kane ayaa labo fursadood kale u helay England laakiin waa ay awoodi waayeen inay shabaqa soo taabtaan iyadoo qeybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay hogaan 2-1 oo ay Iceland ciyaarta ku hogaamineysay.
Fursadii ugu fiicneyd ee England ee qeybtii labaad waxa ay timid daqiiqadii 79aad. Wilshere ayaa kubad qurxoon u dhigay laakiin Kane ayaa madax fician la heli waayay waxaana kubada qabsaday goolhaye Halldorsson.
Gunnarsson ayaa isna fursad fiican helay daqiiqadii 84aad laakiin waxaa ka beeniyay goolhaye Joe Hart oo markaan badbaado fiican sameeyay.
Waxa ay ciyaarta ku soo dhamaatay 2-1 oo ay Iceland si taariikhi ah ugu badisay xulka England oo ay ka reebeen tartanka Euro 2016, wadan ka kooban 330 kun shaqsi ayaa reebay xulka Three Lions waa dhacdo caawa gashay buuga taariikhda kubada cagta. Iceland waxa ay wareega 8da la ciyaareysaa France. Les Bleus waa inay cashar barato wixii ku dhacay England.